Njem - Geofumadas
Foto na akụkọ njem.
Kedu ihe na-eme mgbe ọ dị afọ 40?
Oge ụfọdụ gara aga, edere m otu edemede gbasara mmetụta nke nnwere onwe, n'otu n'ime ọnwa ndị ahụ dị mgbagwoju anya. Nkeji edemede na enwere m obi ụtọ ịgụ akwụkwọ ọzọ, n'ihi na ikekwe ọ bụ otu n'ime ndị ahụ ebe ewepụtara oge ahụ. Foto ọ na - ezisa yiri nke a, ọ bụ ezie na oge ahụ abụghị otu. Ma na mkpokọta,…
Njem ikpeazụ m mere na foto 7
Onweghi ihe ị ga - eme n'okporo ụzọ doro anya nke izu abụọ gara aga. Ma n'agbanyeghị oke ọrụ nke a ga-emerịrị ka ọ ghara ịkwụsị na ugwu, were ụgbọ ala nke gafere n'okporo ụzọ ma ọ bụ chọta obere ụgbọala n'etiti okporo ụzọ ... Gaa ebe a, nọdụ ala n'echiche ahụ ma nwee udo nke anyanwụ na-ebunye ...
Ọnọdụ Dutch, ntụgharị uche nke Latin American
Netherlands ka bụ isi okwu maka ihe dị iche iche na mpaghara teknụzụ, mana tupu m banye n'okwu ụfọdụ na-eme ka m kọchaa ide, dị ka oge ole na ole gara aga nke njem m, achọrọ m ịhapụ ụfọdụ ihe ọmụma na-echere m ogologo oge. nloghachi ụgbọ elu na-efu ihe ...
Geofumadas ... n'ụzọ nkịtị na ofufe
Ọsọ na ala: 627 kilomita kwa elekere Altitude 38,0e00 ụkwụ n'elu ọkwa mmiri Anya na-aga njem 1,251 kilomita Okpomọkụ n'ebe ahụ: -74 degrees Fahrenheit Oge ịga: 2: 25 awa Oge mmalite nke: 3: 00AM Atụmatụ na oge nke mbata 11:27 M Ọ bụghị nke 19 awa nke ụgbọ elu, m nwere ...
Isiokwu ndị na-abụghị ọrụaka nke Congress Survey Congress
Ndewo obi ọmịiko, ọ bụ ọgbakọ omebe iwu na-arụpụta ihe, dị mkpa maka Guatemala na oge dị mkpa maka mpaghara Central America. Tupu m kwuo okwu banyere ọrụaka nke mmemme - nke naanị ndị na - agụ akwụkwọ m nwere mmasị na ya -, nke m ga - eji nwee obi ụtọ maka ụbọchị ole na ole sochirinụ, Achọrọ m iji ohere hapụ ụfọdụ ederede m nwere ...
Emmanuel My egeomates
Foto nke 13
Ọ dịghị ihe dị ka izu ike ruo nwa oge na geofumaditos n'ofe ahụ. Mgbe otu ọnwa nke ịlụ ọgụ na stovu gas, mgbe anyị nyochachara, anyị gara ime emume nke nleta nwanne nna nna nwụrụ na Houston. Na nchịkọta m hapụrụ gị ụfọdụ foto. Mgbe m kwuchara okwu ikpeazụ, ha meriri ebe mbụ na ọkwa nke ngalaba ise nke ...
Geofumadas: Ogologo oge na 8 foto
Njegharị otu kilomita gara nke ókèala ndị dị n’ebe niile mere ka m nwee obi ụtọ n’ụbọchị ndị na-adịbeghị anya. Isiokwu nke anaghị m ekwukarị na ebe a, na-anwa ilekọta amaghị aha ihe ọrụ m bụ na ọ theụ nke isoro ndị ọzọ na-emekọrịta ihe na teknụzụ kerịta. Na njem a enweela m ike nyochaa ikike ...
Agba ezumike na ahịrị
Ọ bụchaghị afọ 400 ka ịgbachi nkịtị, mana iji kwado ya ebe a, m ga-ahapụrụ gị ụfọdụ agba ezumike nke ụmụ nwoke na nwa agbọghọ ahụ na-enwu anya. Njem nlegharị anya nke ụlọ dị ọnụ ala ma na-agbanye mkpọrọgwụ na ụmụaka. Ugbo na-echekwa ụlọ ahịa na obodo Taulabé. Nwa ahụ yiri ka ...
MapEnvelope na London Anya
MapEnvelope bụ anwụrụ na-atọ ụtọ ma dị mfe site na otu nwoke nwere ezigbo uto maka okike. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịju gị anya site n'ikwu ebe ị nọ na ụdị dị iche, MapEnvelope dị ka aha ya si kwuo, na-emepụta envelopu na map a biri ebi. Ọ dị mkpa naanị ịbanye ọnọdụ ahụ, dịka ọmụmaatụ: anya London, london, uk ...
Google Earth / Maps, njem
Geofumadas na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ foto
Otutu ime, maa otutu. Lee, ana m ahapụrụ gị ụbọchị kachasị mma na onyonyo ndị hapụụrụ m ụtọ na-atọ ụtọ. Tonight is with the ọnwa na echi na anyanwụ parachico ị jụrụ m parachico m ga-enye gị With my stick mask my chinchin I will sound you with my colors serape zapateado Agam agba egwu, Little Mermaid ...
Ihe anyị ga-ahụ na 2010 Na-akpali Ya
Couplebọchị ole na ole gara aga, anatara m oku ịbịa Buru n'ike mmụọ nsọ 2010 na afọ a ga-ewere ọnọdụ n'etiti Ọktoba 19 na 20. A gaghị enwe ihe omume na kọntinent America, naanị na Europe, na ebe ka mma karịa Holland, nke n'ụdị teknụzụ a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngosipụta Europe.
Ịga njem, ide ihe, geofumando na-achọ. Na-eme atụmatụ njem m gafee ọdọ mmiri ahụ.
Ntugharị nke Entremares m
Njem m agwụla, ike gwụrụ m ma mịa mkpụrụ. Banyere ịnagide ókèala ọhụụ, oge ịkpa ọchị, na ịkwa ụta maka ichewe ụmụ ọkụkọ na-arụ ọrụ mgbakọ na mwepụ ha na nke bekee. Ihe kachasị achọsi ike, ụlọ nkwari akụ ebe m nọrọ, nke na-abụghị ebe igwu mmiri, ụgbọ mmiri na-agagharị agagharị na ịnyịnya ịnyịnya maka ...